Baarlamaanka oo ansixiyay Sharciga iibka, qandaraasyada, iyo dheef Wadaaga qaranka – STAR FM SOMALIA
Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay Sharciga iibka, qandaraasyada, iyo dheef Wadaaga qaranka waxaan Xubnaha Baarlamaanka soo xaadiray maanta ay gaarayeen 147 xubnood.
Sharciga aya waxaa ogolaatay 143 xubnood,halka ay 3 diiidday midnka ka aamusay,waxaana sidaas ku dhaqan galay oo sharci Baarlamaanku meel mariyay ah Sahrciga iibka Qaranka.
Gudoomiye ku xigeenka Koowaad ee Baarlamaanka Soomaaliya Jeylaani Nuur Iikar ayaa ku dhawaaqay natiijada codeynti ka soo baxday.
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo kale ka dooday sababta loo dhaqan gelin la yahay sharciyada ay ansixiyaan iyo go’aanada ka soo baxa Gudoonka Baarlamaanka iyo Xubnaha Baarlamaanka.
Xisbi siyaasadeed oo soo bandhigay aragtidooda hanaanka doorashada 2016